ICoronavirus, umphakathi olukhuni noma ozuza ubuntu? : UMartin Vrijland
I-coronavirus ngokusobala iletha ukuqina okukhulu emphakathini. Ungabona ukuthi kukho konke ukuhlaselwa kwabezindaba zenhlalo kuye wonke umuntu onesibindi sokuveza umbono ohlukile. Ungenzi iphutha. Eminyakeni engaphezu kwengu-7 engibhalile, ngithole ukuthi inani lamasosha ezempi amdubula ngezinhlamvu zekhibhodi kubantu abezindaba zokuxhumana likhulu kunenani lamasosha egqoke umfaniswano. Baluhlu lwabangane bakho nje futhi banemisebenzi engenamqondo ebonakala ingakhokhi kakhulu, kepha bangathola kahle kakhulu futhi manje bachitha isikhathi esiningi ngemuva kwekhibhodi yabo. Ngabe banayo i-gag evela embusweni? Ukugcinwa kwenzuzo, umusho oncishisiwe?
Uma usufundile incwadi yami, uthole ukuthi iqiniso njengoba sibona ukuthi lithonywa kakhulu yileli nani elikhulu labantu asebevele behlehlisiwe futhi esetshenziselwa ukukhokhelwa nguhulumeni, njengoba kuzoba njalo kuwo wonke umuntu. esimweni sobukhomanisi bezobuchwepheshe manje eselusatshalaliswa. E-GDR yangaphambilini ngaphansi kweSoviet Union, ngaphambi kokuwa kodonga lwaseBerlin, umuntu oyedwa kwabangu-1 kwakungu-Inoffizielle Mitarbeiter (IMB). Ngabe ubucabanga ngempela ukuthi lolu hlelo ngabe lunyamalale kwikhabethe lomdaka uma luphumelela kangaka? Bheka okuhle okuzungezile.
Wonke umuntu uqaphele imiphumela emibi yenkinga ye-coronavirus. Ngabe umbuso unamashumi amashumi ezigidi akhona ngasikhathi sinye ukuthatha amaholo, usize amabhizinisi aswele, futhi uhlehlise intela? Kungenzeka kanjani lokho? Sekuyiminyaka, austerity ibilokhu idonswa ngamandla futhi manje empompini ungavulwa ngokungazelelwe ngokuphelele! Sifakaza ngasese ukwethulwa kwemali eyisisekelo (njengaphansi kobukhomanisi). Leyo mali eyisisekelo u-Inoffizieller Mitarbeiter okungenzeka ukuthi uyijabulele ngasese isikhathi eside.
Lokho kusiza kombuso okungazelelwe kungenzeka kusuka ebhodweni eliyizigidi eziyizinkulungwane ezingama-750 XNUMX I-ECB iphrintwe kabushat has. Noma kunjalo, kukhona enye imbiza.
Ngemuva kwekota 4 ka-2019, ama-euro ayizigidi eziyizinkulungwane ezingama-1560 enhlokodolobha yempesheni ayekhona kuyo yonke imali yempesheni. Izimali ezinkulu kakhulu zempesheni zifaka i-ABP (Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds), PFZW (Pensioenfonds Zorg en Welzijn), PMT (Pensioenfonds Metaal en Techniek), PBF BOUW (Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouonionds Leid de Sortendsonds Lendrendsndndsnd futhi. Ngokubambisana babenokulinganiselwa 909 billion euro imali etshaliwe. Izimali zempesheni nabanye abatshalizimali bezikhungo zinikezela ngevolumu yokuhweba kakhulu kwi-Amsterdam stock exchange.
Lezo zimpesheni zathinteka kanzima ngokuncipha kwezimakethe zamasheya phakathi nale nkinga yamakhorali. Ngichaza ngokuningiliziwe ukuthi lokhu kuhlasela kuyeza noma kunjalo lesi sihloko.
Abezindaba manje babika ukuthi asisekho imali eyanele ukuba sendlini ukuze bahlangabezane nazo zonke izinzuzo zempesheni abathembise ababambiqhaza babo manje nakwesizayo. Isilinganiso sokuxhaswa kwemali sehle sisuka kumaphesenti angama-29 saya kumaphesenti angama-101 ngezinsuku ezingama-95 (iLanga. Kubikwa uTrouw vele ngoMashi 2). Lokhu kusho ukuthi kunamasenti angama-95 ukheshi ngayo yonke impesheni echaziwe yempesheni. Manje i-ECB ibinikela amaphakheji okusekela we-QE (i-Quantative easing) iminyaka. Izinkampani eziningi zikwazile ukugcina ezazo izintengo zesitoko ziphezulu, ngoba empeleni zikwazile ukuboleka imali cishe ngenzalo ye-zero futhi ibhange eliphakathi lathenga leso sikweletu. Uma nje uthenga amasheya ayo, leyo mali ngeke ingene emakethe, kodwa izohlala ungqimba lwabatshalizimali bezikhungo.
Manje njengoba umbuso waseDashi uphonsa amashumi ezigidigidi emphakathini (okucatshangelwa ukuthi uqhamuka e-ECB), le mali iphelela emphakathini. Ngemuva kwakho konke, kunikezwa njengokusekelwa kubantu abazokuthenga ngokushesha ukudla neziphuzo. Uma uphrinta amashumi ezigidigidi njenge-QE futhi lokhu kuqhubeka ukujikeleza kungqimba lwabatshalizimali besikhungo, kunomthelela omncane ekubalulekeni kwemali empilweni yangempela. Kodwa-ke, uma ucindezela amashumi ezigidigidi futhi unikeze abantu, kungavele kuholele ekuphikiseni. Lokhu kusho ukuthi ukusekelwa okuthenjisiwe okwamanje kusengaba impumuzo yabaningi futhi abanye bajabulele umuzwa weholide wokuhlala ekhaya, kodwa lokho akusemnandi ngemuva kwesonto eli-1. Lapho ukwehla kwamanani kufinyelela, kungazelelwe kuba nzima ukugcwalisa esinye isikhwama sokudla kanye nokondla imilomo.
Ngeke ngimangale uma ngibona imali yezimpesheni zisetshenziswa njengezwe. Impela uma kubhekwa iqiniso lokuthi imali yempesheni nayo isezibophweni zikahulumeni (izibambiso ezikweletwayo) futhi uma uhulumeni ethola imali kwi-ECB, iba yigugu elingatheni futhi.
Ngicabanga ukuthi sisemuva kokushintshwa okuphelele, sisuka ku (ngokwazi kwami) ukubusa ngentando yeningi kuya ekuphathweni kobukhomanisi bethekhnoloji (uhlelo lokulawulwa kwedijithali). Kukhethwe indawo eyodwa. Konke ebesikwazi ngaphambili kuzoshintsha (kufaka phakathi izimpesheni). Izinkampani zizobe zenziwa kuzwelonke, hhayi ngokuqondile, kepha isinyathelo ngesinyathelo futhi wonke umuntu uzothola imali eyisisekelo. Leyo mali eyisisekelo ingaqinisekiswa kuphela uma kunokusetha kabusha ngokuphelele kohlelo lwezezimali lomhlaba wonke futhi kungenzeka futhi kuqondiswe kulokhu. E-US, sabona uDonald Trump ememezela izinyathelo ezifanayo izolo njengoba zithathwe lapha eNetherlands. Lokho kuwuphawu odongeni.
Uma ufuna ukuqinisekisa ukuthi uthola imali eyisisekelo ngaphandle kokuthi le mali ibe ingenamsebenzi ngenxa yoxinizelelo, kufanele empeleni uqede intaba enkulu yesikweletu semali ephrintiwe. Futhi uma unikezwe ukuthi imali yempesheni inabanikazi abakhulu bezokuphepha ezikweletini zombuso waseDashi, imali eyimbumbulu kulezo zimali iyaphela.
Manje angazi ukuthi ukukhanselwa okukhulu okunjalo kwazo zonke izikweletu kuzokwenzeka, ngoba kuzodingeka impela ubhekane nalo lonke uhlelo lwebhange kanye nolwezezimali emhlabeni jikelele. Ekugcineni, nokho, ngikholwa ukuthi umsebenzi uqhubekela ohlelweni olusha lwezezimali lomhlaba.
Kulula ukudala i-oda elisha ngaphandle kwezinxushunxushu eziphelele. Futhi lokho kudideka kuzoba kukhulu. Cishe sizofakaza okokuqala ukuthathwa kwemali yempesheni nguhulumeni waseDashi. Eqinisweni, ukwenza izwe lifake imali yempesheni akuyona into edlula ukuthenga imali eningi ephrintiwe ye-apula neqanda, kodwa inani elisesigcinweni sakho semali lingaphezulu kwezigidi eziyizinkulungwane zezigidi ezimbalwa futhi unganikeza ngaphezulu.
Ukusika indaba ende emfushane: Ngikholelwa ukuthi i-hyperinflation iyona ezogcina ixoshe abantu baseDutch ekuvaleni kwabo. Ukulamba!
Sisadlalwa ngabezindaba nosopolitiki abadubula ama-video abo nabantu abahlehlisile (Inoffizieller Mitarbeiter, IMB'ers) okucatshangelwa ukuthi abalugcini ibanga elingu-1.5 wamamitha ukuze kukhiqizwe i-alibi engiyibikezele amasonto amabili: i-coronavirus isisuka ezandleni "ngoba besishintsha kakhulu" ngakho-ke manje kufanele siye kukhiye onzima kakhulu kunaseFrance naseSpain.
Lokho kukhiya okunzima ngakho-ke kuthengiselwa abathengi ngokungenakuvinjwa. Okwamanje, cishe sizotshelwa nokuthi kunjalo coronavirus mutates nokuthi konke kuba yingozi kakhulu. Ngakho-ke, sizithola sisesimweni lapho wonke umuntu esaba umuntu wakubo nokuthi uma uhlangana nomuntu, lokhu kungakubulala. Ngakho-ke, noma ngubani ohamba ngokukhululeka uba yimbangela yokubulawa kwabantu ngokuthi "afe ngokusebenzisa icala".
Cabanga isimo lapho kunokungasebenzi khona ezindaweni zokusabalalisa zamaketanga athile wokuthengisa. Cabanga nje ukuthi ama-ATM awasavunyelwe ukunikela ngemali (ngenxa yengozi yokutheleleka kusuka kulelo gciwane elithambekele kakhulu) bese ucabanga ngehyperinflation, lapho uRutte athembisa imali eyisisekelo nje ekutholela isinkwa esingu-1 ngesonto nesikhwama samazambane. Kuzokwenzekani-ke? Lapho-ke abantu bayalamba bese bephuma ezindlini zabo. Ngemuva kwalokho omakhelwane bayobabikela, ngoba labo abangahamba ngamabhomu e-corona isikhathi sokukhonkotha bayingozi kubo nakibo bonke ababaziyo. Futhi-ke ibutho kufanele lingenelele futhi sizobona ukuthi abantu abaningi bayanyamalala. Leyo akuyona into eyethusayo, lokho ukucabanga okunengqondo.
Futhi-ke sifakaza isiphithiphithi eYurophu engihlala ngilindele. Futhi lapho izinxushunxushu zibusa khona, kuvame ukuba namandla amasha ahlasela ukubeka izinto ngokuhlelekile. Uyazi ukuthi ngikuliphi izwe ukubonwa kusasele iminyaka. Yonke iyisikripthi esiyingcweti futhi ngichaza lowo mbhalo osencwadini yami. Uma uyifundile leyo ncwadi kanye nezinezelwa kuleyo ncwadi lapha kusayithi, uyazi ukuthi likhona ithemba. Kepha lokho kuthatha ukujula. Ukubona okwenzekayo kungamaqiniso futhi kukuhle. Ngemuva kwalokho uzilungiselele futhi uyazi ukuthi ungaletha kuliphi izinga okuthile.
Ukufakwa ohlwini kwezixhumanisi: nos.nl, trouw.nl, trtworld.com
Amathegi: ibanga, eyodwa nohhafu, imali eyisisekelo, coronavirus, afakiwe, ukwehla kwamanani, i-lockdown, imitha, Rutte, ukwesekwa
23 March 2020 ku-10: 10
Phezu kwemithombo yezokuxhumana, lapho wonke umuntu (okuthiwa) exwayisa ngokuthi akekho umuntu othatha umthwalo wakhe futhi angalandeli imiyalo “yokuhlalwa kwezenhlalo” yalaba (okuthiwa yingcweti), leli phephandaba ligcwele futhi ngezexwayiso namhlanje.
Isazi se-telegraph ekusithekeni, sithokomisa amakhanda namuhla siqala: BONGA KOMNYANGO ”. Izimeya kanye nethonya baxwayisa futhi bahlwanyele ukwethuka ukuthi iNetherlands ayinaki kakhulu imiyalo yomfowethu omkhulu, njll.
Abantu balungiselela ukuvalwa okuphelele futhi konke kuyiphutha lethu.
Okumangazayo (ngicabanga ukuthi kuyamangaza okungenani) ukuthi mina nombuthano wami wabangane (nginombuthano omkhulu wabangane) angazi noma ngubani oye noma onayo i-corona, konke kuvela ephephandabeni, i-Nieuwsuur, i-YouTube.
Kuyamangaza futhi ukuthi abantu abaningi abadumile emhlabeni jikelele bane-corona, (empeleni abanawo amandla okucabanga ukuthi ngicabanga kanjani) kubonakala sengathi leli gciwane linaso iso kubantu abadumile (osopolitiki, abaculi, abaculi, izinkanyezi ze-movie futhi bangasisho abadumile abasubathi).
Ngicabanga ukuthi lokhu kuvamile kwigciwane le-corona engicabanga ukuthi liyabandlulula, kungani kuphela abantu abadumile?
23 March 2020 ku-10: 40
Wake waba namalungu e-NSB .. manje sinamalungu e-IMB?
23 March 2020 ku-11: 24
Uma ubhekisisa kakhulu, angamalungu e-NSB impela. Lokhu kungachaza ukuthi kungani kunabantu abaningi balolu hlobo eNetherlands nokuthi kungani kulula kakhulu ukuthi uhulumeni lapha aqoqe futhi ajabulise laba bantu, futhi lokho akuyona mali.
EMpini Yezwe Yesibili, amaJalimane kwesinye isikhathi ayekhala ngokuthi amaDashi ayenamdlandla ekusizeni nasekukhapheleni abantu bakubo. Abanye bakhala ngokuthi ngenxa yalokhu banomsebenzi omningi kakhulu futhi bebematasatasa kakhulu ukuthi bangaqhubeka nokuthatha labo ababekelayo.
AmaDashi (hhayi wonke amaqiniso) ane-streak enomona kakhulu ngaphezu kwesb amaJalimane, amaBelgians kanye namaFulentshi, cishe awaniki omunye umuntu ongumDashi ukukhanya okusemehlo, ngakho-ke yini okungaba ngcono kunokukhaphela abantu bezwe lakho futhi ngalokhu futhi umvuzo omuhle ongawuthola, ngiyasola ukuthi kungahle kube nohlu lokulinda lwabantu abafuna ukuba yi-IMB.
23 March 2020 ku-10: 18
Emgwaqweni ekude ngabona izithandani zibambene ngezandla futhi zangaana (lutho olubi ngayo) njengamajuba enza, umfana nentombazane.
Owesifazane udlule lo mbhangqwana futhi ngamuzwa ethi, uzokuyeka lokho futhi umfana wale ndoda nalo mbhangqwana wethukile wabuza ukuthi kuqhubekani. Uthe, ememeza, "uyazi ukuthi bekungafanele ukuthi uhlanya." Umfana: "ma'am yehlisa umoya, akukho lutho olungahambi kahle". lowesifazane waba nenhloni futhi waqala ukuthuka, kungenzeka ukuthi kwakuphume esandleni, lo mbhangqwana buthule baqhubeka nendlela yabo, owesimame wema.
Nakani kancane omunye komunye
23 March 2020 ku-11: 16
Umphathi we-mith smith effect osebenzayo, noma owaziyo, ukuthi le ntokazi emnandi iyilungu lesimanje le-NSB (elaziwa nangokuthi ngaphansi kwesihloko esithi inofficieller mitarbeiter).
23 March 2020 ku-11: 07
Amabhange avaliwe edolobheni lami namhlanje (test run? Ukubona ukuthi abantu basabela kanjani)?
Ngilindele izinyathelo emasontweni / ezinyangeni ezizayo okuvame ukuthi zidinge uhlelo oluningi lwe-Hegelian dialectics ngaphambi kokuba abantu bakulungele ukuzamukela.
ezinye izinyathelo engizibonayo (angazi uma zenzeka kodwa ngicabanga ukuthi zingakwazi) nemiphumela yazo:
1) umkhawulo wephini ngekhadi ngalinye ngosuku / isonto ngalinye, ngokwesibonelo, ama-euro angama-50. (ukudala ukwesaba izinxushunxushu nokwenza abantu bajwayele ukuzijabulisa)
2) noma ama-ATM avulwa kuphela izikhathi ezimbalwa ngosuku / isonto (ukudala isiphithiphithi futhi nokujwayela ukuba ne-cashless)
I-3) isingeniso (sesikhashana nje, kepha kulezi zinsuku siyisindaba sezingapheli) imali engenayo eyisisekelo
I-4) ukwethulwa kwemali eyisisekelo yokwenyuswa kwentela yesikhashana kuzoholela, ngokwesibonelo, ama-90% ama-SME / abasebenza ngokuzimela abasaphumelela futhi bathola imali enhle noma, ngokwe-elite, ngokwenza inzuzo osizini.
I-5) ukuklanywa kosomabhizinisi abathi kufanele basebenzise leyo nkinga bese bethola imali ngoba bahlakaniphe ngokwanele ukuba beze nemodeli enhle yemali kule hype hype. (Ngikubona lokhu kwenzeka kakhulu ezinkundleni zokuxhumana kanye nezindawo zokubukwa ezinamaphiko angakwesobunxele)
6) I-Nationalization yezezimpesheni nezimboni. (Ama-SME kamuva abanjwa yimikhawulo kanye nokwenyuka okukhulu kwentela (ebizwa ngokuthi ukubumbana kwentela yesikhashana) ukuthi bonke bayabhanga, kufaka phakathi lezo zinkampani ezenza imali enhle yize kunenkinga.
I-7) ama-multicalals ayanda kakhulu futhi anamandla amakhulu, imakethe yamasheya iwa ngokuphelele. Izinkampani ezishintshana ngamasheya zenziwa nguhulumeni (kuthiwa okwesikhashana) ngohulumeni futhi zithengiwe kusukela ezikhundleni ngabaphathi (ukube bezingekho ezandleni zabo).
I-8) Isingeniso esisheshayo esingu-5g emhlabeni jikelele njengokuphepha nokuvimbela ukuqhuma kwegciwane elilandelayo.
23 March 2020 ku-12: 15
Lapho imali yempesheni yenziwe yaba yizwe, ukuxhashazwa kombuso kuyagxivazwa. Le yindlela yokunciphisa isikweletu sikahulumeni. Sesikubonile lokhu ezweni elifana neHungary, lapho imali yempesheni yangasese yaba yizwe kanye nezikweletu zikahulumeni (ezihlobene ne-GDP) zinqamuka ngokushesha. Ukwenza isibonelo, uhulumeni uzosusa ingxenye enkulu yezikweletu zabo, okungenzeka ukuthi kungcono kakhulu emabhange kunokuyiyeka inyamalale. Okokugcina ngoba amabhange awafuni ukuthi labo abanesikweletu semali mboleko bakwazi ukukhipha izikweletu zabo ngale ndlela. Impahla izophelelwa yisikhathi ngenxa yokungakhokhi kwemali mboleko yanyanga zonke evumela amabhange.
23 March 2020 ku-13: 33
Uma abantu bengasakwazi ukukhokha imali abayibolekile, amabhange azobamba.
Uma amabhange enziwa kuzwelonke (bona i-ABN AMRO), umbuso uzoba nazo zonke lezo zindlu ... ubuKhomanisi obusetshenziswayo kwezobuchwepheshe ekwenzeni
23 March 2020 ku-13: 07
Umbiko wofakazi OYEDLU:
NgoLwesihlanu olwedlule ngikhulume ne-Afghan ebalekayo enothisa umnotho wamaDashi njengosomabhizinisi. Ulandise ngomngane omuhle eChina. Lowo mngani uhlukaniswe nomndeni (unkosikazi nezingane ezi-2,5) izinyanga ezimbili. Bathole uhlobo lwevawutsha evela kuhulumeni. Umuntu o-3 womndeni uvunyelwe ukuyothenga nsuku zonke. Ukubika kumele kwenziwe ngohlobo lokuhlola olunqunyelwe kusengaphambili. Ukwenza ngokusemthethweni ngocingo kanye nevawusha. Izitolo ezinkulu ziyaphenduka lapho kuvulwa, kepha kuvulwa kuphela u-1. Ngibuze ukuthi uthini ngomsebenzi wakhe (efektri yokuthunga). Ngenhlanhla nakho lokho "kwaxazululwa". Ukuqasha nogesi kwakungasafanele kukhokhwe, abasebenzi babekhokhelwa nguhulumeni ukuthenga ukudla.
Kamuva lapho ngisekhaya, futhi ngalulama olwazini, imibuzo eminingi ebengifuna ukuyibuza. Kodwa-ke, ithuba lokuthi ngizokwazi ukuxhumana naye uqobo ngesonto elizayo liyancipha usuku nosuku.
1 = akekho
eyodwa = akekho
Uma ubuza imibuzo efanele, ikakhulukazi imibuzo efuna incazelo esebenzayo yenkambo yansuku zonke yemicimbi / umbono, isithombe esikhulu sizovela ngokuzenzakalelayo. Futhi ingabe kulula ukuphetha ngokuqonda ukuthi ngabe kukhona ubuqiniso noma inkohliso yangempela
Attn zzpers manje ababhalisela ukubhalwa phansi kosizo lwezezimali. Umthetho wokuBamba iqhaza usasebenza. Thola isinxephezelo = yenza umnikelo. Uma kungekho msebenzi owuthandayo, khona-ke kukhona umsebenzi. Lokho futhi kuyimodeli yemali engenayo ... kusukela ezikhathini zangaphambili, uhlelo lwe-feudal noma newayini elisha ezikhwameni ezindala?
Thola usizo lwezomthetho? lokho futhi yinto yesikhathi esedlule. Izinkantolo ezingaphansi (zomphakathi) zivaliwe kuze kuphinde kunikezwe esinye isaziso.
sonke simunye, bamba i-drift yami, notch wink wink ungasasho lutho
Noma kunjalo, inani eliphakeme lasentwasahlobo likhona. Ngoba nathi sathathwa yakhala. Imvelo isasele amasonto ayi-6 ngaphambi kwethu, ikhalenda lisemavikini ayisithupha ngemuva. Bona umsebenzi we-Itsjing / jaap voigt futhi uphile ngokuya ngezinkathi zonyaka
Landela imvelo futhi uyimvelo yangempela! Emawadini (esigcemeni) kanye nemawadi wangaphandle (ewadini) yize….
Setha kabusha imiqondo!… .Uma usafuna ukunikeza “usizo”…
24 March 2020 ku-05: 36
UMartin:…. “Ivelaphi leyo mali ?? `
Ngaphandle kokuthi iningi labantu abahola impesheni manje sebefa, nemali yabo yempesheni kuhulumeni yalahlekelwa
ngakho-ke amabhodwe empesheni aya ngokugcwala (abangakhokha ngawo izinto eziningi….)… .is
kukhona okunye futhi: Ngifunde cishe nge-10 (!) edlule ukuthi leyo mindeni ecebile kakhulu (ebizwa ngokuthi i-Illuminati, amaRothschilds, amaRockefellers njll njll) iwagcinile ama-2 0 0 Trillion ngokwehlukana kusuka ngo-2 0 0 7 kakade! Njengoba zinendawo ehlangene engaphezulu kwe-8 5 0 Trillion (eyayilinganiselwa ngaleso sikhathi, mhlawumbe ngaphezulu manje) ungacabanga ukuthi aziphoswa yilezo zigidigidi ezingama-200 sezizonke. Ukuthi ama-trillion angama-200 njengebhange le-piggy kwakuzothatha umhlaba wonke, okwenzeka njengamanje. Kuyo le ndatshana efanayo, ngeshwa angisenaso isixhumanisi sayo, kwathiwa futhi impahla yabantu engaphandle kwale mindeni, ngakho-ke umhlaba, ulinganiselwa ku-40 trillion kuphela. Ngakho-ke ukukhanya kukhanya imali ephindwe izikhathi ezingama-2, njengoba wonke umhlaba ungabantu abayizigidi eziyizinkulungwane eziyisikhombisa.
2 0 0 trillion, uma ungumnikazi we-850 trillion ngakho-ke kuyinto engasho lutho. I-2 0 0 trillion ingu-200 ngama-zeros ayi-18, ngakho-ke empeleni: 2 0 0 bhiliyoni isigidigidi esisodwa. Embhalweni ofanayo bekubuye kuthiwe kusuka kuleli bhodwe, elilodwa kulesi sikhathi sokuthatha, umuntu uzokhokha cishe wonke umkhawulo WONKE WONKE imibuso yawo wonke amazwe, YINI OKUFANELE UVELWE ukukhokha ngalokhu kuthathwa !!! Ukugcizelelwa kwabekwa kuleso sihloko
`kokuthatha`, futhi Hhayi ukuthi bekungabiza malini. Umgomo wokugcina kwaba ngokugqamile kulokhu kuthathwa
futhi imali ibingabalulekile.
Isihloko singatholakala, kepha ngiyaxolisa ngokungabi nesixhumanisi, kudala kakhulu. Impela kuzoba khona abahlaziyi abakhumbula le ndatshana?
« Lapho kufika isivalo se-coronavirus isiyonke nokuthi ibukeka kanjani: izikhala zokuhlola nebutho
I-Bill Gates 'quantum dots' ikhadi le-ID engenantambo eligcina ukuthi une-coronavirus nokuthi ingabe ugonyelwe »
Ukuvakashelwa okuphelele: 1.396.571